Suuriya - BBC News Somali
Kosovo oo 110 muwaaddiniinteeda ah ka soo celisay Suuriya
Kosovo ayaa 110 muwaaddiniinteeda ah ka soo qaadday Suuriya, kuwaas oo badankood ah hooyooyin iyo carruurtooda, balse waxaa sidoo kale ku jira dhowr dagaal yahan.
Kurdiyiinta oo doonaya in la maxkamadeeyo maxaabiista Daacish
Kooxdii la baxday Dawladda Islaamka oo la jabiyey
Xoogagga Kurdiyiinta ee Syrian Democratic Forces (SDF) ayaa sheegay in ay soo afjareen kooxdii la baxday dawladda Islaamka ee ka dagaallamaysay Suuriya.
Trump: Waxaa la joogaa xilligi buuraha Golan loo aqoonsan lahaa iney Israa'iil leedahay
Israa'iil ayaa buuraha muhiimka ee Golan dalka Suuriya ka haysata tani iyo marka uu dhacay dagaalki bariga dhexe ee 1967-kii.
Noocee ayuu ahaa hubkii kiimikada ee loo adeegsaday magaalada Douma?
Hay'adda maamusha hubka kiimikada ee OPCW ayaa baaritaan ay wadday ku soo gebagabeeysay in weerarkii sunta kiimikada ee magaalada Douma ee dalka Suuriya loo isticmaalay chlorine.
2 Maarso 2019
Kumannaan carruur ah ayaa ku cayiran dalka Suuriya, iyagoo wajahaya mustaqbal ana kala caddeyn oo khatartiisa leh, sida ay ka digtay hay`ad samafal.
Dhisme ku dumay Suuriya oo dad badani ay ku dhinteen
Sida ay sheegtay warbaahinta dalka Suuriya ugu yaraan 11 qof ayaa oo afar kamid ah ay caruur yihiin ayaa ku dhintay dhisme uu dalka dagaalkaasi waxyeelleeyey eek u dumay magaalada Aleppo.
3 Febraayo 2019
Israa'iil oo duqeysay saldhig ay leedahay Iiraan
Israa'iil ayaa sheegtay in duqeymo ay la bartilmaameedsatay fariisimo ay Iiraan leedahay
Madaxweynaha Mareykanka ayaa hanjabaad hor leh u diray Turkiga, halka madaxweynaha Turkigana uu arrintan si caro leh uga jawaabay
Ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dalka Suuriya Brett McGurk ayaa iisu casilay go'aankii Madaxweyne Trump ee ahaa inuu ciidamadiisa kala baxo dalka Syria.
Lindsey Graham oo ka tirsan senetarada xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay in soo saarista ciidammada Mareykanku ay khalad tahay.
20 Disembar 2018
Mareykanka oo shaaciyay in uu ciidamadiisa kala baxayo Suuriya
Dowladda Mareykanka ayaa shaacisay in ciidamadii ka joogay Suuriya ay halkaasi kala soo bixi doonto.
Ruushka, Turkiga iyo Iiraan oo ka shiraya xal u helida xaaladda Suuriya
Wasiirrada arrimaha dibadda ee Ruushka, Turkiga iyo Iiraan ayaa lagu wadaa in maanta shir ku saabsan waddanka Suuriya ay magaalada Geneva kula yeeshaan madaxda Qaramada Midoobay.
Qoxootiga reer Suuriya ee ka soo qaxay dagaalka ka socda dalkooda ayaa soo gaaraya caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa.
5 Disembar 2018
Diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa duqayn cirka ah ka gaystay deegaanno ay ku xooggan yihiin mucaaradka Suuriya, wuxuuna ku eedeeyay maleeshiyaadka ka dagaallamo Suuriya in hub Kimiko ah ay ku weerareen magaalada Aleppo ay dowladda haysato.
Kolonyo gargaar ah oo ay leedahay Qaramda Midoobay ayaa waxaa u suuragashay inay gaaraan xero ku taal waddanka Suuriya halkaas oo ay ku nool yihiin 50 kun oo qof oo ka soo baracakay colaadda ka aloosan dalkaasi, goobtaas oo ah xadka lama dagaanka ah ee u dhaxeeya dalalka Suuriya, Urdun iyo Ciraaq.
Israa'iil oo Ruushka uga digtay in Suuriya ay siiyaan gantaalo casri ah
Dowladda Israa'iil ayaa uga digtay Ruushka in ay hubeeyaan qaar ka mid ah wadamo ku yaala gobolka.
Qaraxyo ruxay garoon diyaaradeed oo militariga Suuriya ku leeyihiin Dimishiq
Dowladda Suuriya ayaa beenisay warar sheegaya in qaraxyo is xig-xigay oo ka dhacay garoonka diyaaradaha militariga ay ku leeyihiin magaalada Dhimishiq ay ka dambeeyeen diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda.
Dad aan tira yareen ayaa weli la la'yahay, qaraxa oo ka dhcay magaalada Idlib ee ay kooxaha fallaagada gacanta ku hyayaan.